फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? Canada Nepal
काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य ह्वात्तै घटेको छ । मंगलबार १८ सयले घटेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा १ हजारले घटेको हो ।
मंगलबार प्रतितोला ९२ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा १ हजारले घटेर ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । आज चाँदीको मूल्य १ हजार १ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
मंसिर १०, २०७७ बुधवार ११:००:२२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । मंगलबार तोलामा ४ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा ५ सय रुपैयाले बढेको हो ।
मंगलबार प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज बढेर तोलाको ९२ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।
त्यस्तै आज पनि चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाले बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य ११ सय ६० रुपैँयामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
माघ ७, २०७७ बुधवार ११:३६:३९ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - बुधबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर केही बढेको छ ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १६ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ८८ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ८७ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय ९ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ११ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ८३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ५८ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ५९ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ १३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २९ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ ।
माघ ७, २०७७ बुधवार ०९:१२:३४ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - मंगलबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार तोलामा २ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज तोलामा ४ सयले बढेको हो ।
सोमबार प्रतितोला ९१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज बढेर तोलाको ९२ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।
त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाले बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य ११ सय ४५ रुपैँयामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
माघ ६, २०७७ मंगलवार ११:०४:०३ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - मंगलबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर स्थिर रहेको छ ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १६ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ८४ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ८६ रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय ९ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १० रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकिएको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ५८ रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ५९ रुपैयाँ २८ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ ।
माघ ६, २०७७ मंगलवार ०८:४०:५८ बजे : प्रकाशित
बढ्यो पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य, कुनको कति ?
काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल / मट्टितेलमा लिटरमा दुई दुई रुपैयाँ बढाएको हो ।
यो मूल्य सोमबार राती १२ बजेबाट लागू हुनेछ। मूल्य बढेसँगै अब पेट्रोलको मूल्य ११० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ ।
त्यस्तै डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य ९३ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार अन्य हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत नै रहेको जनाइएको छ।
माघ ५, २०७७ सोमवार २०:५१:४३ बजे : प्रकाशित
धितोपत्र बजार : नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले वृद्धि
काठमाडौँ - लगातार उकालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । हरेक दिन नयाँनयाँ रेकर्ड बनाउँदै अगाडि बढिरहेको नेप्से आजको वृद्धिपछि नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।
कारोबार भएका कम्पनीहरु मध्ये ११० कम्पनीको शेयर उकालो लागेको छ भने ५३ कम्पनीको शेयर ओरालो लागेको छ । कूल १३ कम्पनीको शेयरमा भने कुनै परिवर्तन भएन । कारोवारका आधारमा सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था १०, विशाल बजार कम्पनी ९.९८, गुर्खाज फाइनान्स ९.९७, नारायणी डेभलपमेन्ट ९.९८, स्वाभिमान लघुवित्त ९.९६, आरम्भ चौतारी लघुवित्त ९.९५, सामुदायिक लघुवित्त ९.९५, समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था ९.९५ र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.९५ प्रतिशतले कमाए । यसैगरी समृद्धि फाइनान्स ४.१४, एभरेष्ट बैंक ३.८३, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक ३.६४, गुडविल फाइनान्स ३.०७, मिर्मिरे फाइनान्स २.९३, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स २.४३ र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले २.३७ प्रतिशतले गुमाए ।रासस
माघ ५, २०७७ सोमवार १८:२१:२७ बजे : प्रकाशित